नेपाल सरकारको बजेट 2077-78 - Aathikbazarnews.com Aathikbazarnews.com नेपाल सरकारको बजेट 2077-78 - Aathikbazarnews.com
क) बजेटको आकार र समिक्षा:
राजश्व रु.8.9 खर्ब,बैदेशीक ॠण रु.3 खर्ब, आन्तरिक ऋण रु 2.2 खर्ब र अनुदान रु 0.6 खर्ब गरेर रु 14.75 खर्ब।
चालु रु.9.49 खर्ब , पुँजीगत 3.53 खर्ब र वित्तीय व्यवस्थापन 1.73 खर्ब गरेर कुल बजेट र.14.75 खर्ब।
संतुलित र प्राप्त गर्न सकिने। राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन मुस्किल छ भने पुंजीगत खर्च पनी हुदैन अनी हिसाब मिलान हुने देखिन्छ। चालु बर्ष नै पुजीगत खर्च 30% नहुने देखिन्छ। थप समस्या भएमा सरकारले आन्तरिक ऋण थप्न सक्ने सिमा बांकि लागेको छ। यसरी बजेटको आकार हेर्दा आकार मै कमेन्ट गर्नु पर्ने स्थीती छैन तर प्राथमिकता र बजेट विनियोजनलाई हेर्दा बजेटलाई राम्रो भन्न सक्ने स्थीती पनी छैन।
ख) सकारात्मक बुंदाहरु:
#कोरोना उपचारमा संलग्न चिकित्सकलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता,5लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा!
# स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु.90.7 अर्ब रुपैयाँ ।
#स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु.12.5 अर्ब।
#अबदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई यातायात खर्च दोब्बर।
#कृषकलाई रासायनिक मलमा रु.11 अर्ब अनुदान, उखु किसानलाई रु.95 करोड।
#कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रमोर्चामा खटिने कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको अतिरिक्त भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्तालगायतका अन्य सुविधा खारेज नगरिने।
#राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु.6 अर्ब ।
#सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न र स्थानीय तहमा थप 130 वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु 2.6 अर्ब ।
#13 लाख 40 हजार छात्रालाई स्यानिटरी प्याड नि:शुल्क उपलब्ध गराउने।
#शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु. 171.7 अर्ब।
#आगामी वर्षभित्र देशभर 4G सेवा विस्तार गरिने!
#सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको थप 39 बोर्डर आउट पोस्ट निर्माण।
# उत्पादनमुलक उधोगहरुलाई बिधुत लागतमा 50% सम्म छुट।
# रुग्ण उधोगहरुलाई निजीक्षेत्रको सहभागीतामा योजना सहित संचालनम ल्याउने।
ग) विनियोजन नपुग भएको क्षेत्रहरु:
#2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्न रु.11.60 अर्ब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत । लगभग 20 लाखले रोजगारी गुमाउदै गर्ने कुराको आकलन नै भएन। अनी यो राजनैतिक रुप ले बांडफाड हुने स्थीती नहोस। अलग्गै ब्यबस्थापन हुनुपर्दथ्यो । अरु थप कोषमा गरेको ब्यबस्था पनी पर्याप्त नहुने स्थीती छ।
#कृषि पकेट क्षेत्रका लागि रु.3.22 अर्ब पर्याप्त छैन।
# खाध्य सुरक्षा र आपूर्ति व्यबस्था सुदृढ गर्न 200 वटा खाध्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न रु.1अर्ब बजेट। सही स्थानीय निकाय समेत समेट्न सकेन बजेटले।
#सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि रु.1.26 अर्ब। एकदम न्युन।
#घरेलु, साना तथा मझौला उधोग, पर्यटन, होटेल र कोरोना प्रभावितलाई पुनरकर्जा रु.1 खर्ब सम्म। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकले रु 40 अर्ब जति दिईसकेको छ र रु 60 अरब बनाउने भनीसकेकोमा जम्मा रु.40 अर्ब थप भयो। कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु 26 खर्ब भन्दा बढि छ।
# घरेलु, साना तथा मझौले उधोग र कोरोना प्रभावितलाई ऋण दिन रु. 50 अर्बको छुट्टै कोषबाट 5% ब्याजदरमा ॠण दिने। रकम अपर्याप्त छ। राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई ब्याज छुट दिन भनेको कर्जाहरुको कुल कर्जा रकम रु. 26 खर्ब भन्दा बढि छ।
#नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न 2% ब्याजमा रु 50 करोड शुरुवाती पुजीको व्यबस्था। सोच राम्रो तर रकम ज्यादै न्युन भयो।
घ) जे नहुंदा राम्रो हुन्थ्यो:
# सांसदले चलाउने स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा रु.6.6 अर्ब ।
# कोरोना प्रभावितलाई राहत रकम मा नगदमा आवश्यक भएको अबस्थामा कर 20% देखि 75% सम्म छुट आयो। नाफा नै नहुने अबस्थामा यो त थालमा सुप राखेर भोको सारस लाई लौ अब खाउ भने झै भो।
#वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा 10 र विकास बैंकले प्रतिशाखा कम्तीमा5जनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकमार्फत मिलाइने। गति बढि शाखा उती बढि संचालन खर्च र उती नै बढि सहयोग गर्नु पर्ने देखियो।
# पुराना बजेटमा केहि काम हुन नसकेको धेरै पुर्वाधार विकासका वजेट छुट्याईयो। रोजगारी र कृषिमा जानु पर्ने बजेट प्राथमिकता बिनाका रेल र पानीजहाजमा छुट्याईयो।
# सहकारीलाई अहिले मर्जर होईन व्यबस्थापन, पहुंच र वास्तविक सहकारी को मोडलमा हिडाउन जरुरी छ।
# ईलेक्ट्रिक भेईकलको भन्सार र अन्तशुल्कमा बृद्दि।
# चालु खर्च घटाउनु पर्ने बहस तथा सरकारले भनेको निती अनुरुप पनी नघटाएरै अघी बढेको पाईयो।
ङ) भनिएका कुरा जो भएमा राम्रो:
#सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीको पोसाक नेपालमै उत्पादन गरिने!
#राजमार्गका बढी सडक दुर्घटना हुने क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै फोन नम्बरमा सर्वसुलभ तरिकाले एम्बुलेन्सको सेवा लिन पाउने व्यवस्था!
#आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य बस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम लागू गरिनेछ!
#कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्‍याउन ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ को व्यवस्था गरिनेछ!
#नेपाल एकीकरणको इतिहाससँग जोडिएका गढी र किल्ला र बाटोको संरक्षण गर्दै पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गरिनेछ!
#पहाडी र हिमाली क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास गरी सुविधायुक्त हिल स्टेसनका रुपमा विकास गरिनेछ!
#आगामी वर्ष नवलपरासीको धौवादीबाट फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु गर्न पहुँच मार्ग निर्माण र मेसिनरी जडान गरिनेछ!
#मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आधारभूत पूर्वाधार निर्माण कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाईने!
#आगामी वर्ष भक्तपुर,ललितपुर,चितवनजस्ता ठूला सहरमा बिजुलीको तार भूमिगत बनाइनेछ!
#सबै प्रदेशमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला निर्माण गरिने!
# विदेश अलपत्र नेपाली कामदारल्ई स्वदेश ल्याउने व्यवस्था गर्ने।
# गरिब र बिपन्नलाई निशुल्क बिधुत पहुंच।
# भूमि बैंकको अबधारणा। सम्भावना कति छ हेर्नु बांकी।
#प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाइने : वैदेशिक भ्रमण, कार्यालय सञ्‍चालन, फर्निचरलगायतमा उल्लेख्य रुपमा बजेट कटौती!
# सहकारीमा नगद रहित कारोबार र सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना।
#नगद रहित बैंकिङ कारोबारमा जोड र बैंकीङमा मर्जर प्रोत्साहन।
# पूँजी बजारमा स्टक डिलर सञ्चालन मा ल्याउने।
# 7% को आर्थीक बृद्दिदर।
# भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने दोहोरिदै आएको प्रतिबद्धता।
यसरी बजेट हेर्दा समग्रमा सन्तुलीत। सबै समस्या बुझेर पनी श्रोत संकलन कम हुने सम्भावना हेरेर संकुचीत बनाई ल्याएको देखिन्छ। यो बिषम र बिशेष परिस्थीतीमा पनी बजेटका शिर्षक, विनीयोजन र लक्ष्यमा धेरै जसो पुरानै पुनरावृती देखियो। केहि विनियोजन र व्यवस्थाहरु सांसदहरुको प्रेसर र राजनैतिक जरुरतको लागी समेत आएको देखिन्छन। भने अनुसारको सदुपयोगीता भयो भने यो बिषम परिस्थीतीमा आएको बजेटले प्राथमिकतालाई धेरै ध्यान दिन नसके पनी वास्तविक र सन्तुलीत हुन खोजेको देखिन्छ।
जय होस, शुभ होस।
अपराधीहरुलाई कारबाही गर्न खुट्टा नकमाऊ सरकार
सहमति कार्यान्वयन जटिलता
अजोड इन्स्योरेन्सको खुद बीमा शुल्क पौने चार करोड
नाफाभन्दा धेरै लाभांस पाएपछि सिद्धार्थ बैंकका शेयरधनी मख्ख
बचतकर्ताको उच्च मनोबल बनाउने काम गरेका छौं